“Waxaan jeclaan lahaa inaan qibrad ka soo helo Premier League” – Tababare la la xiriirinayey Shaqada Kooxda Arsenal – Gool FM
Haaruun December 5, 2020
(London) 05 Dis 2020. Tababare si weyn loola xiriirinayay shaqada kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa shaaca ka qaaday inuu jeclaan lahaa inuu qibrad ka soo helo horyaalka Premier League.
Macallin Max Allegri ayaa xaqiijiyey inuu jeclaan lahaa inuu waayo-aragnimo ka soo helo horyaalka Premier League, kaddib markii isaga la la xiriiriyey shaqada Kooxda Arsenal.
Tababarihii hore ee Kooxaha Milan iyo Juventus ayaa ah beeca xorta ah oo meel bannaan taagan haatan, maadaama qandaraaskiisa Bianconeri uu dhacay sanad kaddib markii la ceyriyay, inkastoo uu ku guuleystay shan horyaalka Serie A oo isku xiga.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan qibrad ka soo helo horyaalka Premier League,” ayuu Allegri u sheegay Wargeyska The Times.
“Talyaaniga, waxaan joogay Milan muddo afar sano ah, shan sano waxaan joogay Juventus, hadda waxaan filayaa inaan markale ka shaqeeyo Talyaaniga, laakiin way adag tahay, ama Ingiriiska.
“Aniga ahaan, kubadda cagta Ingariiska waa ay soo hagaageysaa hadda, maxaa yeelay waxaa jira tababarayaal badan oo ajnabi ah, waxaa jira tabo badan marka loo eego 10 sano ka hor, England hadda waa mid casri ah oo xeelad badan, laakiin sidoo kale waxay ixtiraamaysaa dhaqanka kubbadda cagta Ingiriiska.
“Waa isku dheelli-tirnaan wanaagsan oo ku saabsan ruuxa kubadda cagta Ingariiska, tayada cusub iyo habka xeeladeynta cusub ee tababarayaasha cusub.
“Muhiimadu waa waddan kasta wuxuu leeyahay taariikh u gaar ah, Ingiriisku wuu ka duwan yahay Talyaaniga, oo Spain ka duwan Jarmalka, way adag tahay in wax laga beddelo taariikhda dalka.”